साउनको सोमबार ब्रत बस्दा के गर्न हुने के नहुने – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/साउनको सोमबार ब्रत बस्दा के गर्न हुने के नहुने
साउनको सोमबार ब्रत बस्दा के गर्न हुने के नहुने
285 Less thanaminute
काठमाडौं : साउन महिनालाई भगवान शिवको प्रिय महिनाको रुपमा लिइन्छ । माता पार्वतीले साउन महिनामा ब्रत बसेर शिव भगवानको पूजा गरेको कारण शिवजी पाएको किम्वदन्तीमा उल्लेख छ । धर्मग्रन्थअनुसार साउन महिनालाई एकदमै पवित्र महिनाको रुपमा पनि लिइन्छ ।
भगवान शिवको प्रिय रङ्गको रुपमा र जताततै हरियाली हुने भएकाले यो महिनामा महिलाहरु हरियो पहेलो रङको चुरा पोते लगाउने गर्दछन् । यो महिनामा भगवान शिव पृथ्वी भ्रमण गर्न आउने हुनाले साउन महिनामा भगवान शिवको विशेष पूजा आरधना गरिन्छ ।
विशेषगरी साउनको सोमबार बिबाहीत महिलाहरु श्रीमानको शुस्वास्थ्य र दिघार्युको लागि ब्रत बस्ने गर्दछन् भने अविवाहित महिलाहरु सुयोग्य वरको कामना गरी ब्रत बसेर पूजाआजा गर्ने गर्दछ । साउनको सोमबार ब्रत बसेर विधिपूर्वक पूजाआजा गर्नाले मनोकामना पूरा हुनुको साथै दिर्घायु, शुखशान्ती, ऐश्यर्व, धनसम्पत्ती र मानसम्मान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । साउन महिनामा ब्रत बस्ने चलन भगवान शिव र पार्वतीको समयदेखि नै शुरु भएको मानिन्छ ।
विशेष आजको ब्रतको दिन छिटो उठने स्नान गर्ने र शुद्ध वस्त्र लगाउने गर्नुपर्दछ । कालो वस्त्र लगाउनु हुँदैन र एकछाक मात्र भोजन गर्ने गर्नुपर्दछ ।
पूजाको थाली तयार गर्दा अबिर, कपुर, धुपबत्ती, धतुरोको फूल, मह, काँचो दुध, बेलपत्र आदी चढाउनुपर्दछ । भगवान शिवलाई रातो फुल चढाउनु हुँदैन । हरियो, पहेँलो फुल शिवजीको प्रिय हो । भने माछामासु, अण्डा, लसुनप्याज, मुसुरोको दाल अदि खानुहुँदैन । दही, फलफूलको जुस, कागतीपानी, आलु भने भोजन गर्न मिल्छ ।
तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य
भोली श्रीकृष्ण जन्मअष्टमी ! यो एउटा कार्य गर्नुहोस, जस्तोसुकै समस्याको समाधान हुनेछ
भाग्यमानीले मात्र देख्ने नागको अण्डा देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ !
शुक्रबार यस्तो काम गरेमा हुन्छ धन लाभ हेर्नुहोस्